Môrdekay - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Mordekay)
I Môrdekay na Mârdôkea dia olona resahina ao amin'ny Bokin'i Estera, rahalahin-drain'i Estera na zanaky ny mpirahalahy amin-drainy, zanak'i Jairo avy amin'ny fokon'i Benjamina. Atao hoe מָרְדְּכַי / Mordĕkay izy amin'ny teny hebreo fa Μαρδοχαῖος / Mardokhaîos kosa amin'ny teny grika. I Mordekay dia isan'ny taranaka fahefatry ny Jiosy (Jodeana) natao sesitany tany Babilona tamin'ny andron'i Nebokadnezara (na Nabokôdônôzôra).
Ny fandresen'i Môrdekay, sary nataon'i Pieter Lastman tamin'ny taona 1624.
Nonina tao amin'ny tanànan'i Sosàna na Soza tao Persia niaraka tamin'i Estera, izay zana-drahalahiny na mpirahalahy ray aminy sady notezainy sahala amin'ny zanany vavy, i Mordekay. Tafiditra ho isan'ireo vehivavy mpanaraka ny mpanjaka Ahasoerosy i Estera ka kasa vadin'ny mpanjaka taty aoriana. Nahazo anjara raharaha tao an-dapa i Môrdekay, ka nahatsikaritra ny tetik'ireo nikasa hamono ny mpanjaka. Tsy nahomby ilay tetika ka nosoratana tao amin'ny boky firaketan'ny mpanjaka izany.
Tsy nifanaraka tamin'i Hamàna minisitry ny mpanjaka anefa i Môrdekay noho i Hamàna tsy nahazaka ny fahitana an'i Môrdekay afaka ny tsy hiankohoka eo anatrehany. Ny fivavahana jiosy dia mandidy ny Jiosy tsy hiankohoka na amin'iza na amin'inona afa-tsy amin'Andriamanitra irery. Nanomana didy fandripahana ny Jiosy ao amin'ny Empira persiana i Hamàna. Nomanina ny tetika sy ny fotoana hanatanterahana izany didy izany. Nanao izay hampiova hevitra ny mpanjaka i Môrdekay sy i Estera mba hahafahan'ny Jiosy miaro tena. Nifotitra amin'i Hamàna ny tetika nataony ka nahantona izy sy ny zanany lahy folo. Voavony amin'izay ny Jiosy.
Izany andro nivadihan'ny rasa ka nahavotra ny Jiosy izany no ankalazaina mandraka ankehitriny amin'ny firavoravoan'ny Porima (hebreo: Purim).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môrdekay&oldid=975190"
Dernière modification le 3 Oktobra 2019, à 11:21
Voaova farany tamin'ny 3 Oktobra 2019 amin'ny 11:21 ity pejy ity.